Blog - Page 8 of 109 - Ama Kambon
Akwadaa no huri
Ɛberɛ a yɛkɔɔ Chale wɔte afahyɛ
Ɛberɛ a yɛkɔɔ Chale wɔte afahyɛ Da fɛfɛɛfɛ bi na yɛwɔ chale wɔte afahyɛ bi. Na obiara teateaam na nkwadaa na ɛwɔ nneɛma bebree a na wɔde di agorɔ. Nsuo a na ɛwɔ kotokuo mu ne nneɛma nneɛma na na ɛwɔ hɔ. Hmmmm!!! Kankye. Ɛsɛ w’ani na ɛmma ɔkakyerɛ. Sɛ obi huieɛ a anka n’ani […]
Ata resua adeɛ
Ata resua adeɛ Dɛn na Ata tumi yɛ? Ɔtumi kenkan na ɔtumi twerɔ. Adɛn nti na ehia sɛ wubesua ade kan? Ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ mmɔfra sua adeɛ. Adɛn nti na ehia sɛ wubesua akyerɛw? Ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ nnipa afoforɔ sua adeɛ. Adɛn nti na ehia sɛ wubesua akenkan? Ɛfiri sɛ sɛ yɛto Anansesɛm […]
Adu mpɛ sɛ ɔkɔda
Adu mpɛ sɛ ɔkɔda Goru ase kyerɛ sɛ di agoru. Mpa ase kyerɛ adeɛ a yɛda so anadwo. Gyae ase kyerɛ sɛ me gyae agorɔ. Twitwiw yɛ adeɛ a yɛbɛ yɛ ɛberɛ a yɛn se yɛ fi Dɛn na ɛhyɛɛ Adu ɛna abufuw? Na Adu ntie n’asɛm. Dɛn nti na akyiri no Adu yɛɛ nea […]
Kookoo yɛ dua pa
Kookoo yɛ dua pa Memenda anɔpa bi yɛsiim sɛ yɛrekɔ afuom. Ankyɛ na yɛduruu Ɔpanin Yankra kokoo ase. Na kookoo no aso dɔsɔɔ. Afei na ebi abere gonn. Na wɔgu so redɔ kookoo no ase. Enti na aseɛ yɛ fitaa. Ɔpanin Yankra ne ne mma nim adɔ yie. Na wɔtete fifire. Afei na wɔde anigyeɛ […]
Adidie ne ɔnom nkwaadɔm
Tikwankoraa Ɛse Apatan Ammdua nnompe Batire Basa dompe Mfempade Batwe nnompe Nsateaa nnompe Bakɔn nnompe Sisi dompe Serɛ dompe Kotodwe Kotodwe mmuasoɔ Ɛnan dompe Nantin dompe Nanpɔso dompe Nansoaa nnompe ______________________________________________________________________________ Adidie ne ɔnom nkwaadɔm Tɛkrɛma ase Ntasuo akwaa Tɛkrɛma Menewa Dwɛɛdwɛɛwa Berɛboɔ Afuro Bɔwomaa kotokuo Tan Nsono forom Akitegya Nsono abeam Nsono ketewa Nsono […]
Nsrabɔ Dabi yɛ kɔ bɔɔ nsra na nsoromma hyerɛn fɛ fɛ fɛ na yɛ sɔ ɔgya na yɛ yɛɛ aduane. Afe nso na anɔpa bi na awɔ wɔhɔ paa. Enti na yɛwɔ mframa dan a yɛ kɔm. Nso na yɛ kɔɔ mu. Afe nso yɛ twitwaa ɛserɛ nso na ɛserɛ bebree na ɛwɔ hɔ. Afe […]
Ɔhene no Da bi, na ɔhene bi wɔ hɔ. Na yɛfrɛ no Gyifa. Ne din no ase kyerɛ sɛ ɛfa. Na ɔwɔ yerenom bebree. Wɔn nyinaa woo mmarima gye sɛ ne yere baako a yɛfrɛ no Tekyi. Tekyi nkoara na ɔwoo ɔbaa. Yerenom a aka no see wɔpɛ sɛ wɔkum ɔbaa no. Enti da bi, […]
Ìyá àti Dàpọ̀
Ohun tí ìyá ní kí Dàpọ̀ ṣe tí ó fi ń bú ìyá rẹ̀ ni pé kí ó fọṣọ. Tọ́lá àti Kúnlé kọrin fún Dàpọ̀ nítorí pé ó hùwà tí kò dára. Ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ sí ẹni bá rí ìyá rẹ̀ fín ni pé yóò tòṣì.